Ivan Perisic Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts by LifeBogger
musha EUROPEAN FOOTBALL STORies VaCroatia Vanotamba Nhabvu Ivan Perisic Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBhola Genius iyo inonyatsozivikanwa nezita rezita rezita; "Hen". Yedu Ivan Perisic Childhood Nhau pamwe Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira panguva yehucheche kusvika panguva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, mamiriro emhuri, hukama hwehukama, uye mamwe akawanda OFF-Pitch chokwadi (hachizivikanwa) pamusoro pake.
Hungu, munhu wese anoziva nezvekuratidzira kwake kunoshamisa kunowanzoita sewoni kana wechipiri. Zvisinei, vashomanana chete vanoona Ivan Perisic's Bio iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina kunze kwekuita, ngatitangei.
Ivan Perisic Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Ivan Perisic akaberekwa pa 2nd musi waFebruary, 1989 kuna amai vake, Tihana Perišić uye baba Ante Perisic mukati Split, Croatia.
Ivan Perisic anobva kumhuri yekurima. Vose pamwe nevabereki vake, Ivan akakurira pamwe chete nehanzvadzi yake imwe chete, Anita Perisic. Kare kare panguva yehuduku hwake, shamwari dzake dzaiwanzoidza kumudana Koka izvo zvinoreva zvinoreva "hen" mumutauro wake wemutauro. The "Hen"Zita rekudana rakauya rakazoitika nekuda kwekuti jaya Ivan aigara achionekwa achibatsira kunze kwababa vake hen huku yekukuri purazi kunze kweguta rake rokumusha weOmis paCroatia yegungwa.
Kurera hens yaiva bhizimusi guru reAnte (baba vaIvan) nemhuri yake. Pasinei nokuti anonzi zita rezita rokuti "Hen", Ivan haana kutarisira zvakawanda sezvaaizvikudza nebhizimisi rababa vake.
Ivan Perisic Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts- Footy Love & Sacrifice
Kunze kwekubatsira vabereki vake pamunda wekuku, jaya Ivan akagadzira tarenda mumutambo wekutamba mangwanani. Akashandisa nguva yake yekuzvidzivirira kutamba nhabvu uye chido chake chemukona akamuona achinyora neboka remunharaunda, Hajduk Split uyo akamupa mukana wekuratidza tarenda yake.
Chido chaIvan chokutora basa rake chakakomba uye kune imwe nzvimbo yakatevera yakauya nedambudziko rezvemari kumhuri yePerisic. Vabereki vake vakanga vasingakwanisi kutenga mari yekudzidzira. Kudiwa kwemari kwakauya zvibayiro zvikuru nekuda kwebaba vake avo vaitofanira kutengesa mapurazi ake emapurazi kuti vatarise basa romwanakomana wavo raanoda.
Baba vaIvan, Ante Perisic murume uyo anotenda mukutsinhanisa kwemwanakomana wake kunyange kana zvinoreva kusiya zvinhu zvose zvaanazvo. Ante akatengesa zvipfuwo zvake kuitira kuti atore mari kuti atume mwanakomana wake kumusasa wechikoro muCroatia.
Muchiedza chekuti mhuri yake ibude uye inomhanya, Ante aifanira kutenga zvirimwa zvekurima pachikwereti izvo zvakamunetsa mumatambudziko (Yakatsanangurwa pasi apa muIvan Perisic Family Facts). Antie Perisic akanga aripo kumwanakomana wake mumatanho ose emugwagwa.
Ivan Perisic Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts- Chibayiro Chekupedzisira uye Kumuka Mukurumbira
Kunyange zvakadaro, yaiva ibhizinesi rekukuvha kwemhuri yakagadzirisa mararamiro emabasa eIvan kutanga. Ivan akapedza makore matanhatu akasimba kuHajduk, achitamba bhora rake uye kuenda kuchikoro. Pasinei nekurwadziwa nekutora kwake kubva kumagetsi ake ekugadzirwa kwemakumbo, baba vaIvan vakaona vakafunga kutora imwe chikwereti. Panguva ino, mari yekubhadhara yakashandiswa mukutumira mwanakomana wake kuFrance kuitira kuwana mikana yakawanda mubasa rake. Sezvakaita panguva ino, Ivan akashevedzwa kuedzwa naSochaux, kambani yeFrance yakavakwa naJean-Pierre Peugeot, nhengo yakakurumbira yemhuri yePegegeot.
Kune vechidiki Ivan, chinangwa chikuru chekuenda kuFrance kunze kwekuwana mukana mubasa rake ndechokugara akazvimiririra uye kuunza mari kuti adzidzire zvikwereti zvakakura zvababa vake.
Pasina mubvunzo, zvakawanda zvezvikwereti izvi zvakaputirwa kuenda kwake Sochaux. Izvi zvakaitika munguva ye 2006 / 2007. Nenguva isipi kwaari, Ivan akaputika pakarepo achangotamba mutambo wake wokutanga wechikwata. Icho zhizha, mu2006, mapepanhau eFrance akatanga kunyora nezve a musikana ane mvere inoratidzwa pasi apa uyo aifarira kufadza boka racho.
Ivan anoshamisa basa rakamutungamirira kuenda kuBelgium uko aifunga kuti aizokura nokukurumidza. Ivan akatanga nechikwereti kuReselare asati atamira kuClub Brugge kwaakazozvigadzirira zita. NeBelgium club, Ivan akava Belgian Pro League mutsva mukuru wegorogi uye Belgian Best Footballer weChitambo ye2011.
Izvi zvakamuita kuti aende kune Borussia Dortmund uko akakunda 2011-12 Bundesliga. Panguva ino, akanga asiri kuzivikanwa saiye mukomana ane mvere, asi mutezi akakurumidza uye akauraya mumapapiro uye pamberi pechinangwa. Rwendo rwake kuenda kuVfL Wolfsburg neEric Milan rakatevera zvakare uye vamwe vose, sezvavaizotaura, ikozvino nhoroondo.
Ivan Perisic Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Mumakwikwi ose eCroatia akabudirira, kune ngoro inofadza, musikana nemudzimai. Ivan Perisic akasangana nehutano hwake hwekunakidza, Josipa kuchikoro chesekondari. Kare kumashure, vadikani vose vaidzidza navo kuchikoro avo vaive nechechi imwe yevadzidzi muchikoro.
Vose vakatanga ukama hwavo sevanonyanya kushamwaridzana uye gare gare vakabatana nevamwe. Ivan naJosiapa vakaroorwa mu2012 munguva yake naBorussia Dortmund. Vanga vave vakaroorana vanofara kubva muwanano yavo.
Pamwe chete, vose vakaroorana vane mwanasikana anonzi Manuela uye mwanakomana, Leonardo uyo ane makore matatu kupfuura hanzvadzi yake. Leonardo Perisic akaberekerwa muWolfsburg uye anonzi ave nechisungo chakasimba nababa vake vanotenda kuti mwanakomana wavo rimwe zuva achava muteja saiye. Panguva ino, pasina matambudziko emari sezvaakaona nemhuri yake.
Ivan Perisic akakwana zvakakwana kumhuri yake. Iwe haafariri kuparidzira zvakanyanya, Ivan akambotora mufananidzo nemhuri yake pamberi pechitarisiko chakanaka cheLag Lugano muSwitzerland.
Ivan Perisic Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Family Facts
Mari Ivan Perisic yakaitwa mumutambo yakabatsira kumhuri yake. Akatarisira amai vake, hanzvadzi uye akagadzirisa zvikwereti zvababa vake kubva kumidziyo yekurima yaakatenga nemukwereti kuitira kuti mhuri yake irambe iripo.
Sezvimwe zvezvakataurwa zvichinzi, zvekurima zvekurima Antie zvakatengwa nekweretwa hazvina kubhadharwa nenguva uye izvi zvakakonzera kukwikwidza kwemitemo izvo chaizvoizvo mhuri yePerisic yakatya. Kutya kwavo pakupedzisira kwakaguma sezvo Ivan aibhadhara mari imwe neimwe yaikwereta.
Ivan Perisic Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Career Facts
Ivan Perisic kamwechete akawira kunze Jurgen Klopp kuDortmund pamusoro pokushayikwa kwekutamba nguva. Klopp mifananidzo iri pasi apa nguva dzose yakachengetedza mbeveve pavhesi yaPerisic uye yakambomuti "childish"Nekuda kwemagariro ake .Ichokwadi, Ivan Perisic haafarire kugara pabhenji. Paakabvunzwa nezve izvi, akati;
"Pandinogara pabhenji, ndiri kufa," Kudamba mutambo kunonzwa sechirango kwandiri. Ndaifanira kudzidza kudzidzira maitiro pamusoro payo nenzira yakaoma. Ndinofanira kukura mupfungwa "
Ivan Perisic haasi shamwari yevana Juventus vanobhadhara. Kana akatsamwa, anobata muvengi wake nemutsipa uye musaya sezvinoratidzwa munyaya yacho Juan Cuadrado uye Alvaro Morata.
CHOKWADI KUTI: Tinovonga nekuverenga Ivan Perisic Childhood Indaba pamwe ne untold biography zvinyorwa. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe kana kuti taura nesu!
Jadon Sancho Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts